Usejahe ukwenza adume ngakho uNeyi Zimu
UMCULI wowokholo uNeyi Zimu uzimisele ngokululama abuyele esiteji
FANELESIBONGE BENGU | November 28, 2019
UMCULI wowokholo osaxinwe wukugula, uNeyi Zimu, uthe ukubheke ngabomvu ukululama abuyele esteji.
Lokhu kushiwo yimenenja yakhe uMatthew Nkabinde izolo ngesikhathi ebuzwa yileli phephandaba ngesimo sikaNeyi Zimu.
Selokhu kuvele imibiko yokugula kwakhe imiyalezo yokumfisela ukululama ilokhu ingena ingenile. Ngesonto eledlule umholi we-EFF, uMnuz Julius Malema, wamvakashela esibhedlela iChris Hani Baragwanath, eSoweto.
Emcimbini wemiklomelo yabaculi bowokholo amaCrown Gospel Music Awards abeseThekwini ngeSonto nakhona wafiselwa ukuthi alulame ngokushesha. Emcimbini kwaculwa nengoma yakhe eyayishisa izikhotha ethi Jehova Retshepile Wena.
“Uyayibona yonke imiyalezo athunyelelwa yona,” kusho uMatthew.
“Uzizwa engcono kakhulu futhi ukujahe kabi ukubuyela esteji ngonyaka ozayo. Ubencokola engibuza ngomcimbi esiwenzayo ukuthi kukhona bani ohlwini lwabazocula. Ngithe uma ngimtshela wathi abaqhubeke bazenzele kodwa yena nakanjani ngonyaka ozayo uzobuya ngamandla kwiSpirit of Praise 8,” kuqhuba uMatthew.
Uthe isimo sakhe sesingcono kunangesikhathi angeniswa ngaso esibhedlela.
Ngaphandle kokucula ngokuzimela uphinde abe seqenjini iSpirit of Praise elithathe indondo yeBest Gospel DVD neyeBest Gospel Group kumaCrown.